” စိမ်း ပြာ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” စိမ်း ပြာ “	9
” စိမ်း ပြာ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 25, 2015 in Photography |9comments
” စိမ်း ပြာ ”
alinsett says: အစိမ်းရော အပြာပါ…. ကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့အရောင်တွေပါ…
အဲ့အရောင်တွေနဲ့…ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပုံလေးတွေမို့… သဘောကျမိ…
ညနေ မမှောင်ခင် အလင်း..ရှိချိန်မှာ… ထိုင်ပြီး…ငေးချင်စရာ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နေဝင်ချိန်လေးဆိုပိုလွမ်းရမှာပေါ့
E-မြောက်မြောက် says: စိမ်းပြာ ဘီးဖာ ပိန်းကြာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်တစ်ခါ အလယ်ပုံ
မြစပဲရိုး says: စိမ်းပြာ ဆိုမှ စိမ်းပြာပါဘဲ။ :-))
kai says: စိမ်းပြာ..ရှေးက.. ပန်းချီမှာအစပ်ရခက်လို့လားမသိ.. သိပ်မတွေ့ရ.. သလို.. တွေ့ဖူးတာကလဲ..ကမ္ဘာတွေကျော်.
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ငှက်ခါးအရောင် ကို စိမ်းပြာလို့
Ma Ei says: အစိမ်းရော အပြာရော
ခု လေးပုံလုံး တစ်ကယ်ကိုသဘောကျတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အစိမ်းကလဲရင်အေးစေပါတယ်